हेर्नुहोस आजको राशिफल : आईतबार कस्तो रहनेछ तपाईंको भा’ग्य ? – Khabarhouse
हेर्नुहोस आजको राशिफल : आईतबार कस्तो रहनेछ तपाईंको भा’ग्य ?
Khabar house | २२ चैत्र २०७७, आईतवार ०१:२९ | Comments
यूवा ज्योतिषी डीपी भण्डारी : वि.सं.२०७७ साल चैत्र २२ गते । आईतबार । ईश्वी सन् २०२१ अप्रिल ०४ तारिख । नेपाल संवत् ११४१ । प्रमादी संवत्सर । उत्तरायण । वसन्त ऋतु । श्रीशाके १९४२ । चैत्र कृष्णपक्ष । तिथि–सप्तमी, ०८ घडी ३९ पला,बिहान ०९ बजेर २१ मिनेट उप्रान्त अष्टमी । नक्षत्र– मूल,०४ घडी १६ पला, बिहान ०७ बजेर ३६ मिनेट उप्रान्त पूर्वाषाढा । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ०५ बजेर ५३ मिनेट, सूर्यास्त बेलुकी ०६ बजेर २२ मिनेट । दिनमान ३१ घडी १२ पला ।
मेष : महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्पादन गर्नको लागि अवसर जुर्नेछ । राज्य तथा राजनीतिमा सम्मानजनक उपस्थिति रहने हुनाले जनताको काम गरी नाम तथा दाम दुवै कमाउन सकिनेछ । अध्यात्म तथा धा’र्मिक क्षेत्रमा रुची बढ्नेछ भने धार्मि क प्रतिष्ठान तथा मन्दिर तिर गई टिका तथा प्रसाद ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । यात्रासँग सम्वन्धीत व्यावसाय फ’स्टाएर जानेछ भने आर्थिक अवस्थामा सुधार भएर जानेछ । प्रे’ममा रमाउन चाहनेहरुका लागी समय राम्रो रहेकोछ ।
वृष : व्यापार व्यावसायमा आजको दिन लगानी नगर्नु नै राम्रो हुनेछ । स्वास्थ्यमा समस्या आई उपचार खर्च बढेर जानेछ । बिद्यामा सफलता पाउन मिहिनेत गर्नुपर्ला । दिदी बहिनीबाट सहयोगको आश्वासन मात्र प्राप्त हुनेछ । भौतिक सम्पती तथा रुपैया पैसा ह’राउन तथा लुटिन सक्छ ध्यान दिनुहोला । आर्थिक अप’चलनको मु’द्धा मा’मिला आई लाग्न सक्छ काम गर्दा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । तरपनि बैक तथा वित्तिय संस्थामा गरीएको लगानी बाट सन्तोषजनक नाँफा हुनेछ ।
मिथुन : पारिवारीक सम्वन्ध,दाम्पत्य जीवन तथा मा’या प्रे’ममा सा’मिप्यता बढेर जानेछ । व्यापार व्यावसायमा प्रशस्त आम्दानी हुनेछ। लामो तथा रमाईलो यात्रा हुने हुँदा मन प्रशन्न हुनेछ । पारिवारीक जमघटमा सहभागी भई मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । बिद्या तपार्ईँले सोचेजस्तै राम्रो हुनेछ । भौतिक सम्पती तथा सवारी साधनको प्राप्तीको गतिलो योग रहेको छ ।
कर्कट : व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने थोरै मिहिनेतले प्रशस्त लाभ लिन सकिने छ । बाद वि’वाद तथा प्रतिस्पर्धामा तपार्ईँ कै जित हुने तथा स’त्रु प’रास्त हुनेछन् । न्यायालयबाट हुने न्या’यिक निर्णयहरु तपार्ईँकै पक्षमा हुने छन् । प्रे’ममा सा’मिप्यता बढेर जानेछ । पुरानो रोग तथा स्वास्थ्य सम्वन्धी स’मस्या हल भएर जानेछ । बिद्यामा गरेको लगानीबाट राम्रै प्रतिफल पाइने योग रहेकोछ ।
सिंह : बौद्धिक कार्यमा सहभागी भई आफ्नो गतिलो प्रस्तुती पस्कने अवसर प्राप्त हुनेछ । पढाइ लेखाइमा सुधार भएर जानेछ भने नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ । परिवार तथा सन्तानबाट तपार्ईँले गरेको काममा सहयोग हुनेछ । व्यापार व्यावसायमा लगानी बढाउँदा राम्रो कमाई हुनेछ । मा’या प्रे’ममा विश्वासको वातावरण बढेर जानेछ भने भौतिक धन सम्पती लाभ हुने समय रहेकोछ ।
कन्या : घरजग्गा तथा सवारी साधनको खरिद बिक्री गर्दा ध्यान दिनुहोला घा’टा लाग्न सक्छ । बिद्यामा सन्तोषजनक प्रगती भएर जानेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको आलो’चनात्मक समर्थन रहनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसाय भने फस्टाएर जानेछ । आमा तथा आमा सरहका मानिससँग मन मु’टाव बढ्नेछ । विश्वास गरेकाहरु बाट धो’का हुनसक्छ सजक रहनुहोला । वाहिरी वातावरणसँग जु’ध्न नसक्दा छाती स’म्वन्धी सम’स्या आउन सक्छ ।
तुला : पराक्रम बढेर जाने हुनाले जोसिलो काम गर्ने जागर आउनेछ । सानो प्रयत्‍नले राम्रो काम गरी फाइदा लीन सकिने छ भने प्रतिस्पर्धीहरु प’रास्त हुनेछन् । दाजुभाई तथा छिमेकीहरुसँगको स’म्वन्धमा सुधार भएर जाने छ । छोटो तथा रमाईलो यात्रा हुन सक्छ । उत्पादित उद्योगमा लगानी बढाई भने जस्तो रुपैया पैसा कमाउन सकिनेछ । मा’या प्रे’ममा सामिप्यता बढेर जानेछ । लेखन कला तथा साहित्य जस्ता क्षेत्रमा झु’काव बढ्नेछ ।
वृश्चिक : बोलिको प्रभाव बढ्ने हुनाले महत्वपूर्ण निर्णयहरु आजको दिन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । पारिवारिक जमघटमा दिन बित्ने तथा मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुने छ । प’ति प’त्नी तथा माया प्रे’ममा सा’मिप्यता बढेर जाने छ । कु’टुम्बबाट तपार्ईँले गरेको काममा सहयोग प्राप्त हुनेछ । पढाइ लेखाइमा सफलता हात लाग्ने योग रहेकोछ । व्यापार व्यावसायबाट प्रशस्त नाँफा कमाउन सकिनेछ ।
धनु : कामहरु स्वत स्फुर्त रुपमा अगाडी बढ्नेछन् । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जाने तथा नयाँ प्रकृतिको व्यावसायमा लगानी गरी मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको गतिलो समर्थन प्राप्त हुनेछ । माया प्रे’मको डो’रो क’सिलो हुनुको साथै घर परिवारमा बि’ग्रेको स’म्बन्ध सुधार भएर जानेछ । पारिवारिक माहोलमा मिष्ठान्न भोजनमा साथ रमाईलो गरी समय कटाउन सकिनेछ ।
मकर : अस्वभाविक खर्च बड्ने हुँदा मन चिन्तीत रहनेछ । शारिरिक कष्ट तथा आँखामा स’मस्या देखिन सक्छ । मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठा गुम्ने ख’तरा रहेकोछ सजक रहनुहोला । व्यापार व्यावसायमा नाँफा कमाउन निकै नै स’घर्ष गर्नुपर्ला । बिद्यामा सोचेजस्तो प्रगती गर्न निकै समय कुर्नु पर्नेछ । आफन्त तथा परिवारजन तपार्ईँदेखि टाढिन सक्छन् । तरपनि वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्ब’न्धित व्यावसाय भने फ’स्टाएर जानेछ ।
कुम्भ : आफन्तजन तथा दाजुभाईबाट भनेजस्तो सहयोग पाइने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ । माया प्रे’ममा सा’मिप्यता बढेर जानेछ भने परिवार तथा सन्तानको प्रगतिमा मन प्रशन्न हुने छ । व्यापार व्यावसायबाट मनग्गे आम्दानी गर्न सकिने छ । भौतिक सम्पती तथा सवारी साधन प्राप्तिको गतिलो सम्भावना रहेकोछ । बिद्यामा प्रतिस्पर्धीहरुलार्ई किनारा लगाउदै नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ । प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग मार्फत मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ ।
मीन : गित संगितमा विषेश रुचि बढ्नेछ भने बिद्यामा तपाईँ अव्वल सावित हुनु हुनेछ । स’त्रु प’रास्त हुनेछन। पारिवारिक जमघटमा सहभागी भई मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको गतिलो समर्थन प्राप्त हुने हुनाले मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा बृद्धि भएर जानेछ । व्यापार व्यावसायमा प्रशस्त आम्दानी हुनेछ । कृषी तथा पशुपालन व्यावसायबाट राम्रै आम्दानी हुनेछ । तपाईँको दिन शुभ रहोस् ।